An-tserasera ny Lahatsary &Lahatsoratra Mampiaraka amin'ny Chat miaraka amin'ny rosiana & okrainiana ankizivavy
An-tserasera ny Lahatsary &Lahatsoratra Mampiaraka amin’ny Chat miaraka amin’ny rosiana & okrainiana ankizivavy
Online fifandraisana efa ela no iray amin’ireo fomba malaza indrindra mba hihaona amin’ny zazavavy. Be dia be ny hatsaran’ny te-hahita mahaliana lehilahy amin’ny aterineto. Raha tianao niady hevitra tamin’ny zazavavy an-tserasera, ianao angamba no nanontany tena, ahoana ny manomboka ny fifandraisana amin’ny vehivavy iray amin’ny fiarahana amin’ny chat na ny tambajotra sosialy. Inona mety ho mora kokoa noho ny mipetraka, manomboka amin’ny chat, nangataka ny nomeraon-telefaona, ary handeha amin’ny daty ny ankizivavy? Rehefa miresaka an-tserasera, tsy mila miahiahy momba ny fomba fijery na matahotra ny hanatona ny ankizivavy.
Ity lahatsoratra, tsara ny manazava hoe ahoana no hanombohan-dresaka tamin’ny zazavavy an-tserasera. Amin’ny fiarahana amin’ny aterineto, fitsipika andian-teny momba ny tovovavy dia ny tsikiny na tarehy fotsiny tsy miasa noho ny vehivavy amin’ny toerana fiarahana mandray be dia be toy izany ny hafatra, ary mety fotsiny tsy mahita anao.
Toy izany ny hafatra tahaka ny: Hi
Ahoana no ataonao, ny vehivavy dia mahita manelingelina. Ny maha-tokana ny andian-teny voalohany antoka fa ny zazavavy no mandoa ny saina ho anao, ary te-hahazo ny mahafantatra anao tsara kokoa. Fa miezaka ny tsy overcomplicate ny hevitry ny hafatra voalohany raha tsy izany, fotsiny ianao tsy ho takatra. Alohan’ny hiditra amin’ny firesahana amin’ny fiarahana amin’ny namany sary, mijery ny alalan ‘ ny hery mpiara-dia mombamomba azy sy ny hahalala bebe kokoa momba ny namana, ny tombontsoa, fialam-boly, ary ny toerana dia nitsidika. Rehefa fikarohana, miezaka ny hahita zavatra izay mety ho mitovy mahaliana ho anareo roa, toy ny fialam-boly, na ny toerana tena toerana. Ohatra, rehefa nahafantatra fa ny ankizivavy mandeha ny dobo filomanosana na ny fanatanjahan-tena club, dia afaka hilaza azy, fa ianao koa dia toy toy izany ny karazana fanatanjahan-tena ny asa.
Izany fomba afaka hitandrina ny resaka mandeha
Raha manana ahiahy momba ny mpiara-mitory ny maha-scammer avy amin’ny fiarahana amin’ny sampan-draharaha, miezaka mampiaraka ny lahatsary amin’ny chat mba ho azo antoka fa ny zazavavy misafidy dia tena marina. Aza t hilaza ny zava-drehetra momba ny tenanao indray, fa ny fizarana sasany fanazavana manokana dia mbola ilaina mba mahaliana ilay zazavavy ao anaty fifanakalozan-kevitra aminao. Rehefa miresaka momba ny tenanao, ho azo antoka ny hangataka ny vaovao namana sasany ny fanontaniana momba ny fiainana, ny eritreritra sy ny zavatra niainana avy ny fotoana ny fotoana. Rehefa manomboka ny resaka amin’ny zazavavy tamin’ny alalan’ny an-tserasera niaraka chat, tsy tokony handainga momba ny tenanao, na ny toetra amam-panahy ary manitatra ny sata ara-bola. Toy izany lainga izany no mahatonga azy io efa ho vita mba hahazoana ny fifandraisana an-tena izao tontolo izao, izay ny fitaka dia avy hatrany dia hita miharihary. Tsy maninona raha izy no lasa namana na ny mpiara-miasa ho amin’ny fiainana, raha toa ilay ankizivavy, dia tokony hilaza aminy ny momba izany. Ny zava-dehibe kokoa, aza adino fa ny vehivavy dia toy ny mampamangy, fa be loatra mandrobo ihany no manao ny ratsy. Ny zava-dehibe indrindra ho an’ny tovovavy dia ny fahadiovam-po izany, ny resaka, dia ho lava sy mahafinaritra. Asaivo iray, fara fahakeliny fanontaniana izany dia hanampy mbola mifampiresaka. Tsy misy fanontaniana dia tsy hisy ny resaka rehetra. Tandremo ny mombamomba azy matetika, izany dia taratry ny maha-izy azy eo amin’ny tena fiainana. Raha toa ka tia manao zavatra mampihomehy, mahatsikaiky loatra raha izy no mitovy bebe kokoa amin’ny ara-olona, miezaka ny ho toy izany koa. Ny hafatra voalohany tokony ho tany am-boalohany sy ny tsy marina: Hi, manao ahoana ianao? Hitany an-jatony toy izany hafatra isan’andro. Mitsangana avy any amin’ny vahoaka, dia aoka ny tenanao ho nahatsikaritra. Aza t hilaza rehetra momba ny tenanao indray, fa hizara vaovao. Toy izany ianao hitandrina azy liana amin’ny fifandraisana. Raha toa ka misy fiatoana, milaza ny sasany tantara mampihomehy avy amin’ny fiainanao. Ny zavatra tsara indrindra momba na karajia amin’ny aterineto sy ny mampiaraka toerana dia tsy afaka milaza na inona na inona tianao.
Fa aza manao toy ny olona tsy ianao
Raha tsy te-hiresaka momba ny zavatra, vao tsy manoratra momba izany, fa tsy lainga. Ny fitaka dia hambara rehefa manomboka ny fivoriana eo amin’ny tena fiainana
← Ny lahatsary amin'ny chat ANTSIKA ny fifadian-kanina Online olom-pantany